YEYINTNGE(CANADA): Thursday, April 01
1 April 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/n9rj86e1 April 2010 Yeyintnge Diary Summary only...
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ တိုက်ဖျက်ရေးနည်းပရိယာယ်....
http://ifile.it/cfluzgygsreport-2010april Summary only...
မြန်မာဘာသာဖြင့် အလုပ်အဖွဲ့ ၏ အစီရင်ခံစာ (ASIA SOCIETY)
http://ifile.it/h6wxnjgTaskForce_ExecutiveSummaryBurmese Summary only...
မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ASIA SOCIETY ၏ အစီရင်ခံစာ
http://ifile.it/kstw9jhPerspectivesfromAsia_IntroBurmese Summary only...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NEJ/ ၁ ဧပြီ ၂၀၁၀ လွန်ခဲ့သော (၄၈) နှစ်က ဗိုလ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်၍ စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံရေး၌ စစ်ခေါင်းဆောင်များကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနေ၏။ အရပ်သားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သောအဆင့်ကို မရောက်နိုင်ကြပါ။ စစ်သားအရပ်သား ဆက်ဆံရေး၌ စစ်သားက အမြဲတမ်း အပေါ်စီးရနေ၏။ ဆိုရှယ်လစ်အရေခြုံ၍ တပါတီအာဏာရှင်အမည်ခံ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးရာတွင် ကွန်မြူနစ်လူထွက်နှင့် လက်ဝဲသမားများကို အခိုင်းခံလက်ပါးစေနေရာအချို့ကို ပေးခဲ့သည်။ စစ်တပ်နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပါက အရပ်သားသည် အခိုင်းအစေအဆင့်၌သာ လုပ်နိုင်သည်ကို မဆလပါတီဝင်ဟောင်းများ ကောင်းစွာသိကြ၏။ အန်အယ်လ်ဒီဗဟိုကော်မတီဝင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ ဤကိစ္စကို ကောင်းစွာသိကြသည်။ “မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ” အမည်ခံသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် (၂၆) နှစ် ကျင့်သုံးသည်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ခံပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းသားနှင့် အလုပ်သမားဆန္ဒပြပွဲများကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုများကို နိုင်ငံခြားမှ အပြင်းအထန်ကန့်ကွက် အရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ မဆလခေတ်၏ ဖိနှိပ်မှုများကို ပြည်ပရောက် မြန်မာအချို့က ဖော်ထုတ်ကြသော်လည်း ဗိုလ်နေ၀င်း၏ မဆလအုပ်စုသည် အင်္ဂလန်၌ အလှည့်ကျဆေးကု၍ ဇိမ်ခံနိုင်ကြ၏။ ပြည်တွင်း၌ မတရားလုပ်နေသော မဆလအစိုးရကို ပြည်ပကလက်မခံကြသဖြင့် မဆလစစ်ဗိုလ်များသည် မိမိတို့လုပ်ရပ်ကို အဟုတ်ကြီးမှတ်၍ မိမိအပြစ်မမြင်နိုင်ကြပါ။ အထက်ကခိုင်းသမျှ လုပ်ကိုင်ကြရသည့် စစ်တပ်နိုင်ငံရေးသံသရာ၌ ကျင်လည်၍ ဘ၀ရပ်တည်နေကြသည်။ ၁၉၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် မဆလနိုင်ငံရေးစနစ် ပြိုကွဲပျက်စီးသွားရသည်။ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းသောအခါတွင် စစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းပြီး ဒဏ်ခတ်အရေးယူလာကြသည်။ ထိုစဉ်မှစ၍ ပြည်တွင်း၌ ဖိနှိပ်လေလေ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီများက အရေးယူလေလေဖြစ်လာသည်။ ပြည်တွင်း၌ မတရားလုပ်သည်ကို ကြည့်မကောင်းတော့၍ ပြည်ပက ဝေဖန်ရှုတ်ချ အရေးယူလာခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံကြသော ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်များကလည်း ၎င်းတို့ရောက်လေရာ တိုင်းပြည်များ၌ ဆက်လက်လှုပ်ရှားကြသဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်၏ ယုတ်မာရက်စက်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက သိရှိကြ၏။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်း၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိနေသည့်အတွက်လည်း ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကို နိုင်ငံတကာမှ အလေးအနက် ဂရုပြုလာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၌ အမှုထမ်းဖူးပြီး နိုင်ငံခြားပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ကျင်လည်ခဲ့သော ဒေါ်စုသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖျက်မှုကို Amnesty ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့သို့ စာရေးအကြောင်းကြားသည်။ တရားမ၀င်သောစစ်အစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက အရေးယူရန်လည်း ရန်ကုန်နေ နိုင်ငံခြားသံအမတ်များကို စာရေးပန်ကြားခဲ့၏။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပညာရှင်များအဖွဲ့ကိုလည်း စာရေးတိုင်ကြားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ခံရ၍ ရပ်တန့်သွားသော ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုသည် သေရာက ပြန်ရှင်လာသည်ဟု မြင်ကြသူများရှိ၏။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည်လည်း ဤသို့ပင်မြင်ပုံရ၏။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိပါက မဆလခေတ်အတိုင်း စစ်ဗိုလ်၊ စစ်ဗိုလ်လူထွက်နှင့် လက်ပါးစေအရပ်သား ပူးပေါင်း၍ စိတ်ကြိုက်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မည်ဟု ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် နောက်လိုက်များက ယူဆထားပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အဓိကအလုပ်တခုဖြစ်လာ၏။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းသည် ဒေါ်စုနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အမြဲတမ်း တောင်းဆိုနေသည်။ အသိဉာဏ်ပညာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ သီလသမာဓိရှိပြီး လူထုထောက်ခံမှု ရရှိထားသော ဒေါ်စုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ထောက်ခံသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်နိုင်မည့် အခန်းကဏ္ဍကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်နစ်နာ၏။ ဒေါ်စုခေါင်းဆောင်သော နိုင်ငံရေးပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတိုင်း အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ဗိုလ်သန်းရွှေတို့အဖွဲ့က ယုံကြည်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်နိုင်ရန်နှင့် ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်နိုင်ရန် စည်းမျဉ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုကြောက်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအဖြစ် သမိုင်းတွင်မည်။ နအဖဗိုလ်ချုပ်များ မမေ့နိုင်သည်မှာ ၁၉၉၀ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်၌ အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်စု၏ သြဇာအရှိန်အ၀ါကို တိုင်းတာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြည်တွင်း၌ ဖိနှိပ်သော စစ်အစိုးရကို ပြည်ပမှ အရေးယူနေသည်မှာ အနှစ် (၂၀) ကျော်ပြီဖြစ်၏။ ပြည်ပဖိအားပေးမှုနှင့် အရေးယူမှုများကြောင့် စစ်အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် အကျင့်ဆိုးများ ပြောင်းလဲသွားသည် မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအရ မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် အရေးယူနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပြည်ပမှ အရေးယူသည်ကို လေ့လာပါက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု အချည်းနှီးမဖြစ်သည်မှာ အလွန်ထင်ရှားသည်။ မဆလခေတ်၌ ဗိုလ်နေ၀င်းထင်သလို လုပ်သည်ကို နိုင်ငံခြားက အရေးယူခြင်းမရှိဘဲ နအဖခေတ်ရောက်မှ နိုင်ငံခြားက ဝေဖန်ရှုတ်ချ၍ အရေးယူဒဏ်ခတ်နေခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် နောက်လိုက်များက ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားအလိုတော်ရိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိမှ စိတ်ကြိုက် နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်မည်ဟု စစ်အုပ်စုက ယုံကြည်နေပုံရသည်။ ဒေါ်စုမပါသော နိုင်ငံရေးလောကကို ဗိုလ်သန်းရွှေက တည်ဆောက်ချင်၏။ ဗိုလ်နေ၀င်းမသေမီ ဗိုလ်စောမောင်လက်ထက်ကလည်း အဖမ်းခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးတင်ဦးကို အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ထုတ်ပယ်ထားခဲ့ဖူးသည်။ ဒေါ်စုမရှိလျှင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အသက်မရှိဖြစ်နေသည်ကို စစ်အုပ်စုနားလည်၏။ ဒေါ်စုအဖမ်းခံနေရချိန်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ရုံးမှန်မှန်တက်သော စာရေးကြီးပါတီအဆင့်သာရှိ၏။ ကုလသမဂ္ဂက လုပ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နေသော ပါတီပင်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်တဦးတည်းကိုသာ အလွန်အမင်းအားကိုးသောပါတီသည် သဘာဝမကျ ယုတ္တိမရှိသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီသည် လမ်းမလျှောက်နိုင်သော သက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်သွားတော့၏။ လက်တွေ့အခြေနေအရ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ထောက်ခံသူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဘဲ နိုင်ငံရေးလုပ်တတ်ရန်လိုသည်။ ခေါင်းဆောင်တဦး အဖမ်းခံရရုံနှင့် ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသော နိုင်ငံရေးပါတီမဖြစ်သင့်ပါ။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးမလုပ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းလိုသူသည် စစ်ဗိုလ်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ရပေလိမ့်မည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်မည်ကို စဉ်းစားရပေလိမ့်မည်။ နိုင်ငံခြားကူညီရိုင်းပင်မှု တခုတည်းကိုသာ အားကိုးနေ၍ အကြောင်းမထူးသည်ကို တွေ့ကြုံရပြီးဖြစ်ပေသည်။ လက်နက်အားကိုး၍ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ယုံကြည်လာမှသာ အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်နိုင်ပေမည်။ နိုင်ငံရေးအရ အဖြေမရှာနိုင်ပါက ပြဿနာပို၍ ကြီးမားလာမည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက နားလည်သဘောပေါက်မှသာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စွန့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ မကျေနပ်၍ ဆန္ဒပြသော ပြည်သူလူထုကို ပစ်သတ်နေ၍ ပြဿနာ ပြေလည်မည်မဟုတ်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ယုံကြည်လာမှသာလျှင် အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့သော အခြေအနေသို့ ရောက်လာအောင် ကြိုးပမ်းသည်ကို လက်တွေ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတခုဟု သတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။http://www.khitpyaing.org/editorial/April%202010/1410.php
ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘာကိုရွေးကြမှာလဲ
ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘာကိုရွေးကြမှာလဲ ကျော်ဗလ ၁/ ဧပြီ ၂၀၁၀ နအဖက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေရဲ့ အခန်း (၂) ပုဒ်မ (၆-ဂ) အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် လျှောက်ထားမယ့် ပါတီဟာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီဥပဒေရဲ့ အခန်း (၃) မှာ အဆိုပါ ၀န်ခံချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် မရှိစေရလို့လည်း အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာ တရားဝင် တည်ရှိနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို အဓိကဦးတည်ပြီး နိုင်ငံရေးထိုးစစ်ဆင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရဲ့ လက်တွေ့အဓိပ္ပာယ်က လက်ခံနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံနိုင်သည်ဖြစ်စေ အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့ နအဖရဲ့ ၂၀၀၈ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ နိုင်ငံရေးအရ ၀န်ခံဖြောင့်ချက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံရေးအရ ၀န်ခံချက်မပေးရင် အန်အယ်လ်ဒီဟာ တရားဝင်ပါတီအဖြစ်က ရပ်စဲခံရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် စိန်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ပါတီ တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့် ရချင်ရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ရှေ့မှောက်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ဒူးထောက် အညံ့ခံလိုက်ဖို့ နိုင်ငံရေးအရ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဆိုတာ မိုးပေါ်က ကျလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေးအတွက် ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှုကြီးက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပါတီသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါတီတရပ်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အာမခံချက် ဘာမှမရှိဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်လက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စီမံလုပ်ကြံထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ရှေးရှုသောအားဖြင့် ဒီအခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ နအဖအဖွဲ့ထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာကိုလည်း ကျောခိုင်းလျစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နအဖအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလိုတဲ့ သဘောထား ဘာမှမရှိကြောင်းကို ဗြောင်ကျကျ ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ အခုပိုဆိုးတာက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံရင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့် မပေးဘူးလို့ နိုင်ငံရေးအရ စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဒီတော့ အန်အယ်လ်ဒီအနေဖြင့် ပါတီရပ်တည်ခွင့်ရရေးအတွက် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ကြိတ်မှိတ် လက်ခံလိုက်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံချက် မပေးနိုင်ရုံမက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပါ အသက်ဆက်ပေးမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ငြင်းဆန်လက်မခံဘဲ ပါတီကို ဖျက်သိမ်းခံမှာလားဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းကြီး (၂) ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘယ်ဟာရွေးမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ - ပါတီရပ်တည်ခွင့်ကို အရယူရင် နိုင်ငံရေးသေမယ်၊ - နိုင်ငံရေးရပ်တည်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင် ပါတီရပ်တည်ခွင့် ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘယ်ရပ်တည်မှုက အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အဖြေပေးကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီမေးခွန်းကို မှန်ကန်စွာ အဖြေပေးနိုင်ဖို့ ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးသဘောကို အသေအချာ နားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းမှာ ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီဟာ ဂျီစီဘီအေအဖွဲ့ကြီးလို့ပဲ အသိအမှတ် ပြုကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဖွဲ့ကြီးကို နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီစီဘီအေ အဖွဲ့ကြီးရှိလာလို့ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဗြိတိသျှကိုလိုနီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းရေး၊ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် လက်ခံရေး စတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာ ဂျီစီဘီအေအဖွဲ့ကြီးလည်း ပြိုကွဲသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ သခင်စိုးခေါင်းဆောင်တဲ့ အလံနီပါတီဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာကလည်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် နိုင်ငံရေးသဘောထား၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ မတူကွဲလွဲလာမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလံနီပါတီဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာလို့ နိုင်ငံရေးသဘောထား ကွဲလွဲကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်က “သေရဲတာအလံနီ၊ တိုက်ရဲတာ အလံနီ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ ပထမဆုံး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး စလုပ်ခဲ့တာလည်း အလံနီပါတီပါပဲ။ ၇၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ “လက်နက်ကိုင် သူပုန်ထမိတာ မှားပါပြီ” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူ စစ်အစိုးရဆီမှာ တပါတီလုံး လက်နက်ချလိုက်ကြတဲ့အခါ အလံနီပါတီဆိုတာလည်း ပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ပေါ်ပေါက်လာမှု၊ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားမှုဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသံသရာဆိုတာ ဒီပါတီတွေအပေါ်မှာ တည်မှီနေတာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား၊ လမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာသာ အဓိက မူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါတီရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ပါတီဆိုတာ နိုင်ငံရေးရဲ့ ခန္ဓာအိမ်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဝိညာဉ်မရှိရင် ပါတီလည်း မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ပါတီမရှိပေမယ့် နိုင်ငံရေးဝိညာဉ်ကတော့ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဆိုတာလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ နိုင်ငံရေး သဘောထားတွေနဲ့ ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကြီးက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပါတီတရပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း န၀တ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်က အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ဖြိုခွဲဖို့၊ ချေမှုန်းပစ်ဖို့ တလျှောက်လုံး ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီဝင်တွေကို ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချ၊ သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။ ပါတီဝင်တချို့ကို ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးစုံသုံးပြီး ထွက်အောင် ဖိအားပေးတာ၊ မက်လုံးအမျိုးမျိုးပေးပြီး ဖြိုခွဲဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ ပါတီအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြုတ်၊ ရုံးတွေပိတ်၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ် ခဲ့ကြတာလည်း နေရာအနှံ့ပါပဲ။ တကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဟာ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်အရသာ ရှင်သန်တည်ရှိနေပြီး ပါတီတရပ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရပ်တည်ခွင့် မရတော့တာ ဆယ်စုနှစ်တခုတောင် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထဲမှာ ဗဟိုကော်မတီ၊ တိုင်းစည်း၊ မြို့နယ်စည်းတွေ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့် ရတယ်ဆိုတာ လပိုင်းလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ပါတီဖွဲ့စည်းရပ်တည်မှုဆိုတာမျိုးက နအဖရဲ့ တချက်လွှတ်ဥပဒေအမိန့်အောက်မှာ အချိန်မရွေး ပြိုပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖအဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးလို့မရတာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓာတ်တွေပါပဲ။ အခုလည်း နအဖက ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာတွေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးဖို့ အကျပ်ကိုင်ကြိုးပမ်းနေပြန်ပါပြီ။ ဒီဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခွင့်ရယူမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဖျက်သိမ်းခံမလား ဆိုတာကို အရွေးချယ်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတီ ဘယ်ဟာကိုရွေးပြီး ဘယ်ဟာကို စတေးမယ်လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ပါတီရပ်တည်ခွင့်အတွက် နိုင်ငံရေးအရ လက်နက်ချဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်းပါပဲ။ တကယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးကို စတေးလိုက်ရင် ပါတီဆိုတာလည်း ၀ိညာဉ်အနုတ်ခံလိုက်ရလို့ ဇီဝိန်ချုပ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီနေ့ တည်ရှိဆဲ တစညတို့လို ပါတီဆိုတာသာရှိပြီး နိုင်ငံရေးဝိညာဉ် ချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့ ပါတီသေတွေနဲ့ တတန်းစားထဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တမူးသားပဲရရ၊ တမတ်သားပဲရရ၊ စင်ထိုးပေးရင် တက်ကချင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ပျက်တွေထက်တောင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ပိုမိုအောက်တန်းကျ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအနေအထားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ထောင်ထဲက ရဲဘော်တွေက သစ္စာဖောက်ပါတီအဖြစ် စွဲချက်တင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေက ကျိန်စာတိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း တံတွေးနဲ့ ထွေးကာ ကျောခိုင်းသွားကြပါလိ့်မ်မယ်။ ခြုံပြောရရင် နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို အသေသတ်ပစ်ဖို့ ထောင်ချောက်အမျိုးမျိုးဆင်၊ ကျော့ကွင်းအမြောက်အမြား ဆင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသတ်ကွင်းပါ။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးလှတဲ့ နိုင်ငံရေး စမ်းသပ်ကွက်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နအဖရဲ့ နိုင်ငံရေးသတ်ကွင်းထဲမှာ အရှင်ထွက်နှင့် အသေထွက် (၂) ချက်ပဲရှိလို့ပါ။ ပါတီရှင်ရင် နိုင်ငံရေးသေမယ်၊ နိုင်ငံရေးရှင်ရင် ပါတီသေမယ်။ တခြားရွေးချယ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးအရ အမြော်အမြင်ရှိစွာ အမြင်ကျယ်စွာ ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင် …ပါတီရှင်သန်ခွင့်ရပြီး နိုင်ငံရေးအသေခံရမှာထက်စာရင် နိုင်ငံရေးရှင်သန်ခွင့်အတွက် ပါတီအစတေးခံရတာက ပိုမိုသင့်မြတ် မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးရှိနေသမျှ ပါတီဝင်တွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ပါတီဝင်တွေ ရှိနေသမျှ ပါတီဆိုတာလည်း ရှိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ။http://www.khitpyaing.org/articles/2010/April/1410.php Summary only...
http://ifile.it/2neaktsNDF Stat on SPDC's Threat Summary only...
လူထုတိုက်ပွဲ ၊ ဦးဆောင်ပါတီ NLD
“ လူထုတိုက်ပွဲ ၊ ဦးဆောင်ပါတီ NLD ” ရဲဘော် ဗိုလ်သူ စစ်အုပ်စုရဲ့ နိုင့်ထက်စီနင်းထုတ်ပြန်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ တွေက NLD ဘာလုပ်မလဲလို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ စစ်အုပ်စုရဲ့ ထိုးနှက်မှုကြောင့် NLDပါတီတွင်း ရှေ့ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ ၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ထုံးစံ အတိုင်းရှိခဲ့ပေမဲ့ “ မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရဖီဆန်ကြ ” ဆိုတဲ့ ၊ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုအမိန့်နဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်းကို အခိုင်အမာ ဆုတ်ကိုင်ရင်း ၊ အညံ့မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) က ချမှတ်လိုက်ပါပြီ ။ ဒါဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို “မှတ်ပုံမတင်ဘူး ၊ ဘာလုပ်မလဲလို့ ” စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပဲ တုန့်ပြန် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ၊ ခုလောက် ညီညွတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးထင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ NLD ပြိုကွဲအောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၊ ဒီလို မပြိုမကွဲ တညီတညွတ်ထဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ စစ်အုပ်စု နည်းနည်းတော့ပြာယာခတ်သွားမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ ကြိုပြင်ထားတာမျိုးလဲရှိမှာပါ ၊ သူတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တက်ကြွသူတွေကိုဖမ်းမယ် ၊ မတရားအသင်းကြေငြာမယ် ၊ ပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်ချခိုင်း မယ် ၊ အနိုင်ကျင့်မှုမျိုးစုံကို ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းလမ်းစုံသုံးပြီး လုပ်လာမယ် ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ ၊ ရာဇ၀တ်သားတွေကိုသုံးပြီး NLDအဖွဲ့ဝင်တွေကို ၀ိုင်းရိုက်တာမျိုး တွေလုပ်လာမယ် ၊ ပြီးတော့ NLD ထဲက မှတ်ပုံတင်ချင်တဲ့လူကြောက်တွေ ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်တဲ့ အခွင့်ရေးသမားတွေ၊ ကို မြှောက်ပေးပြီး အနိမ့်ဆုံးအဆင့် NLDကနှုတ်ထွက်ပါသည်ဆိုတာမျိုး ၊ လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့လဲ ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြင်ရပါတော့မယ် ၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေ အောက်မှာ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘူး ၊ တင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ၊ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြားမှာ ၊ ဗမာပြည် ပြည်သူလူထုကြားမှာ ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကြားမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ရပ်တည်ချက်သာဖြစ်ပါတယ် ၊ အဲဒီ ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာကြောင်းပြဘို့ ၊ ရန်ပြုလာမဲ့စစ်အုပ်စုကိုကာကွယ်ဘို့ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ရပါမယ် ။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်းပါအချက်တွေကို ကြွေးကြော်သံအဖြစ်ကိုင်ဆွဲရင်း လူထုကို ဦးဆောင် ရပါမယ် ၊ NLD ဟာ လူထုဦးဆောင်ပါတီ ၊ လူထုရှေ့ က တပ်ဦးပါတီ ဖြစ်နေရပါမယ် ။ စစ်အုပ် စုက ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံလုပ်လာခဲ့ရင် နယ်စပ်ကိုထွက်လာတာမျိုးမဖြစ်ဘို့တော့ သတိထားရပါမယ် ။ ကိုယ်ကနယ်စပ်မှာနေပြီး ဒီလိုပြောရတာ NLD ကို အားနာမှုများစွာနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် ၊ စစ်အုပ်စုက နယ်စပ်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကို လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဂရုကိုမစိုက်ပါ ဘူး ၊ ပြည်သူလူထုအုံကြွမှာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက ပြန်တိုက်မှာပဲ ဂရုစိုက်တာပါ ၊ လူတွေနယ်စပ်ကိုထွက်တာ တခြားနိုင်ငံတွေကိုခိုလှုံတာ စစ်အုပ်စုအကြိုက်ပါ ၊ နယ်စပ်ရောက်သွားပြီးရင် တော်လှန်ရေးအလုပ်ထက် ဘ၀ရပ်တည်ရေးအလုပ်တွေပဲ လုပ်ဖြစ် သွားကြတာများပါတယ် ၊ လက်ရှိနယ်စပ်တွေမှာရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူ အများစုဟာ အလုပ်သမားရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကလေးအခွင့်အရေး ၊ အမျိုးသမီးအရေး စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်တွေပြ ၊ NGO တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ့်ရပ်တည်ရေးအတွက်ကိုယ် လုပ်နေကြတာများ ပါတယ် ၊ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရင် လင်ကတစ်ဖွဲ့ မယားကတစ်ဖွဲ့ ၊ လင်မယားနှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး တပ်ပေါင်းစုရယ်လို့ တစ်ဖွဲ့ ၊ နှစ်ယောက်ရှိရင် သုံးဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး လစာထုတ်စားနေကြတဲ့ လခစားနိုင်ငံရေးသမားတွေ များပါတယ် ( မှန်မှန်ကန်ကန် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို မပြောပါ) ။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုက နယ်စပ်ကလူတွေကိုမကြောက်ပါဘူး ၊ ပြည်တွင်းထဲက NLD အဖွဲ့ဝင် တွေကိုတော့ လူငယ်လေးတွေကအစ ကြောက်ပါတယ် ၊ ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နေပြီး ပြည်သူ့ အုံကြွမှုကို ဦးဆောင်နိုင်မဲ့သူတွေ ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ပါ ။ ဗမာပြည်အကျဉ်းထောင်အသီးသီး က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၀၀ ကျော်မှာ NLD အဖွဲ့ဝင် ၅၀၀ နီးပါးရှိနေတာ ၊ လူထုက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ NLD ကို ၊ စစ်အုပ်စု တလျှောက်လုံး ကြောက်နေခဲ့လို့ပါ ။ အဲဒီတော့ အဖမ်းခံစရာရှိ ရဲရဲအဖမ်းခံ ၊ သေစရာရှိရဲရဲသေပြီး ပြည်တွင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရင်ဖြတ်သန်းဘို့ ၊ ပြည်သူကိုဦးဆောင်မှုပေးဘို့ အားနာနာနဲ့ပဲ တောင်းဆို ပါရစေ ။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည် ’ လို့ တဆက်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဒီကနေ့အဖြေအနေနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးတောင်းဆိုမှုပါ ၊ အရေး ကြီးတာက တောင်းဆိုမှုက အချိန်အကန့်အသတ်လိုနေပါတယ် ၊ ပြီးရင် အဲဒီအချိန်အတွင်း တောင်းဆိုမှုကိုမလိုက်လျောရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပါ ၊ ကြိုတင်ပြင်ထားဘို့လိုပါတယ် ၊ တောင်းဆိုနေရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ စစ်အုပ်စုက မလိုက်လျောတတ်ဘူးဆိုတာ ၊ ၂၁နှစ်စာ အတွေ့အကြုံတွေကနေ သိသင့်ပါပြီ ၊ တိုက်ပွဲနဲ့ တောင်းဆိုမှရမှာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအားလုံးကလဲ NLD ကို တပ်ဦးတင် လိုက်ပါဘို့ လိုပါတယ် ၊ စစ်အုပ်စုက NLD ကို ၂၁နှစ်တာကာလ တလျောက်လုံး နှိပ်ကွပ်ခဲ့ သလို ၊ ခုလဲ အရင်ထက်ဆိုးတဲ့ နှိပ်ကွပ်မှုတွေနဲ့ တုန့်ပြန်လာတော့မှာပါ ၊ ခုချိန်မှာ NLD အရေး ဟာ ပြည်သူ့အရေးပါ ၊ NLD ဖြိုခွဲခံရရင် ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေး ကြာသထက်ကြာနေဦးမှာပါ ၊ “စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဘို့မလိုပါ ”ဆိုတဲ့ NLDရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံပါသည်ဆိုတာမျိုး ၊ ကြေငြာချက်တွေထုတ်နေရုံသာမဟုတ်ပဲ NLD နှင့်ထပ်တူ ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်မှုမျိုး လုပ်ကြရပါတော့မယ် ၊ ၂၀၁၀ လူထုတိုက်ပွဲ ကြီး လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဆင်နွှဲဘို့ အချိန်ကျပြီ ၊ ဦးဆောင်ရမှာက NLD ပါ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မုချကျဆုံးရမည် ။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ။ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ရဲဘော် ဗိုလ်သူ Summary only...
ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူးစီးပွားသတင်ဂျာနယ် Volume 1 of Issue 4. APRIL 2010
http://ifile.it/6sm7owuRohingya Journal Volume 1 of Issue 4. Summary only...
မြန်မာဘာသာဖြင့် အလုပ်အဖွဲ့ ၏ အစီရင်ခံစာ (ASIA SOCI...
ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူးစီးပွားသတင်ဂျာနယ် Volume 1 of...